Ukuguqulwa 101 - Inguqu yamaProthestani eYurophu
Ukuguqulwa kwakukwahlukana kwicawa yamaLatini yobuKristu eyayishukunyiswa nguLuther ngo-1517 kwaye yavela kwabanye abaninzi kwiminyaka elishumi ezayo-umkhankaso owadala waza wazisa indlela entsha yokholo lobuKristu olubizwa ngokuthi 'iProtesitanti.' Ukwahlukana akukaze kuphulukiswe kwaye akunakwenzeka, kodwa ungacingi ngecawa njengokwahlukana kwamaKatolika kunye namaProtestanti amasha, kuba kukho uluhlu olukhulu lweengcamango zamaProthestani kunye neenqwelo.
ICawa yeNgaphambi kweNguqulelo yeLatin
Ekuqaleni kwekhulu le-16 leminyaka, entshonalanga neYurophu ephakathi kwalandelwa iSonto LaseLatini, eliphethwe ngupapapa. Ngoxa unqulo lwalukhupha ubomi bomntu wonke eYurophu-nangona ihlwempu igxile kwinkolo njengendlela yokuphucula imihla ngemihla kunye nesityebi ekuphuculeni emva kokufa-kwakukho ukunganeliseki kwimiba emininzi yecawa: kwi-bureaucracy yayo, eyaziwayo ukuzidla, i-avarice, kunye nokusetyenziswa kakubi kwamandla. Kwakhona kwakukho isivumelwano esasasazeka ukuba icawa kufuneka iguquke, ibuyisele kwifomu ecacileyo kunye nechanekileyo. Nangona icawa yayinokutshatyalaliswa ngokutshintsha, kwakungekho mvumelwano encinane malunga noko kufuneka kwenziwe.
Inkqubo yokuguqulwa kwamatye amaninzi, kunye nokuzama kwamapapa phezulu ukuya kubabingeleli phantsi, kwaqhubeka, kodwa ukuhlaselwa kuhloswe kugxininisa kwimiba enye kuphela ngexesha, kungekhona icawa yonke, kunye neendawo zendawo ezikhokelela kuphela kwimpumelelo yendawo .
Mhlawumbi i-bar enkulu yokutshintsha kwakukholelwa ukuba icawa yayisondeza kuphela indlela eya kusindiso. Oko kwakudingeka ukuguqulwa kwamanzi kwakuyi-teoloji / ingxabano enokubakholisa ubungqina babantu kunye nababingeleli abangazange bawudinga icawa esekelwe ukuyigcina, ukuvumela ukuguqulwa kokusebenza kungakhange kulandelwe ukunyaniseka kwangaphambili.
UMartin Luther wanikezela umngeni onjalo.
ULuther kunye noJuqulelo lwesiJamani
Ngo-1517 uLuther , onguNjingalwazi weTheology, wavutha ngumsindo xa kuthengiswa iindulgences waza wavelisa ama-95 athile kubo. Wabathumela ngasese kubahlobo kunye nabachasene kwaye banokuthi, njengendalo, babakhombise emnyango wesonto, indlela eqhelekileyo yokuqala ingxoxo. Ezi zinto zatshicilelwa ngokukhawuleza kwaye iiDominican, ezathengisa ezininzi iintetho, zabiza izigwebo kuLuther. Njengoko ubupapa behleli kwisigwebo kwaye kamva bamgweba, uLuther wakhiqiza umzimba onamandla, ebuyela kwisibhalo ukuze anzima umngeni wamapolisa okhoyo kwaye uphinde ucinge ngendlela yesonto lonke.
Iingcamango zikaLuther kunye nesitayela sokushumayela kumntu kungekudala basasazeka, ngokuthe ngqo phakathi kwabantu abakholelwa kuye kunye nxalenye phakathi kwabantu abathandana nenkcaso yakhe nebandla. Abashumayeli abaninzi abahlakaniphileyo nabanobuchule baseJamani bathatha iimbono ezintsha, bafundisa kwaye bongezelela ngokukhawuleza nangakumbi ngempumelelo kunokuba ibandla lingaqhubeka nalo. Akuzange kube khona ngaphambili ukuba abefundisi abaninzi banokutshintshela kwinkqubo entsha eyahlukileyo, kwaye ngokugqithisa kwexesha bacela umngeni kwaye bathatha indawo yonke into ebalulekileyo yecawa yakudala. Kungekudala emva kukaLuther, umshumayeli waseSwitzerland obizwa ngokuba nguZwingli wavelisa iingcamango ezifanayo, eqala i-Swiss Reformation ehlobene.
Isishwankathelo esifutshane soTshintsho lweeNguquko
Imiphefumlo yayisindiswa ngaphandle komjikelezo wokuphulukiswa nokuvuma (okwakungokobubi), kodwa ngokholo, ukufunda, nobabalo lukaThixo.
Isibhalo sasiyigunya kuphela, ukufundiswa ngolwimi lwesizwe (iilwimi zasekhaya ezihlwempuzekileyo).
Isakhiwo esitsha secawa: uluntu lwamakholwa, lugxininise kumshumayeli, aludingi ulawulo oluphambili.
Iingqungquthela ezimbini ezikhankanywe kwizibhalo zigcinwe, nangona ziguquliwe, kodwa ezinye ezihlanu zadityaniswa.
Ngamafutshane, icawa ecacileyo, eyindleko, edibeneyo kunye nabafundisi ababengabikho baba yinto ethatyathelwa ngumthandazo okhuselekileyo, unqulo, kunye nokushumayela kwendawo, ukubethelela abantu kunye nabafundisi bezenkolo.
Ifom yeeCawa eguquliwe
Intshukumo yokuguqulwa kwamkelwa ngabaphathi kunye namagunya, ukudibanisa neenjongo zabo zezombusazwe nezentlalo ukuvelisa utshintsho oluthe xaxa kuzo zonke izinto ezivela kumgangatho wabantu-abantu abaguqula-ukuya kwiindawo eziphezulu ezikarhulumente, apho iidolophu, amaphondo, kunye nezikumkani ezipheleleyo zisemthethweni kwaye ziqala icawa entsha.
Isenzo sikaRhulumente sasidinga njengoko iicawa eziguqukayo zingenalo igunya eliphambili lokukhupha icawa yakudala kunye nokufaka umyalelo omtsha. Inkqubo yayingenakunqanda-kunye neengingqi ezahlukeneyo-kwaye zenziwa ngaphezu kwamashumi eminyaka.
Izazi-mlando ziqhubeka zixubusha ngezizathu zokuba abantu, kunye noorhulumente abasabela kwiminqweno yabo, bathatha i-'Protestanti '( njengokuba abaguquleli bezaziwa ), kodwa ukudibanisa kungenzeka, kubandakanye ukuthatha umhlaba kunye negunya kwicawa yakudala, inkolelo yokwenene kwisigijimi esitsha, 'ukubethekisa' ngabantu ababandakanyekayo kwingxoxo yenkolo ngokokuqala ngqa nangolwimi lwabo, ukuchasana nokuphikiswa kwicawa, kunye nenkululeko kwimimiselo yecawa yakudala.
Ukuguqulwa kwakungeke kwenzeke ngegazi. Kwakukho umbambano wamajoni eMbusweni ngaphambi kokuba kubekho ukulungelelanisa icawa elidala kunye neenkonzo zamaProtestanti, ngelixa iFransi yahlaselwa yi-'Iimfazwe zeNkolo, 'yabulala amashumi amawaka. Nangona eNgilani, apho kwakusekwa khona icawa lamaProtestanti, amacala omabini ashutshiswa njengoko icawa yakudala uMary Mary yalawula phakathi kwamakhosi amaProtestanti.
Ukuvumelana okwabangela ukuba izazi zonqulo kunye namaqumrhu adala amasonto aguqule ngokukhawuleza aphule ngokungafani phakathi kwamaqela onke, abanye abaguquli bekhula ngokugqithiseleyo kunye noluntu (njengama-Anabaptist), okukhokelela ekushushisweni kwabo, kwicala lezopolitiko eliphuhliswe kwi-theology kunye nokukhusela umyalelo omtsha. Njengengcamango yecawa eliguqukayo kufuneka liguquke, ngoko baxabana kunye nababhali abafunayo kunye nomnye nomnye: ubunzima bobuguquko bonke abavelisa iingcamango zabo babangela uluhlu lwezinto ezahlukeneyo ezivame ukuphikisana, kubangela ukungqubuzana okukhulu.
Enye yale yayikuthi ' iCalvinism ,' ukuchazwa ngokuchaseneyo kwamaProtestanti akucinga ngento kaLuther, eyathatha isikhundla sengqondo 'endala' kwiindawo ezininzi phakathi kwexesha leshumi elinesibhozo. Oku kuye kwabizwa ngokuba yiNguqulelo yesiBini.
Nangona iinqwenelelo kunye nezenzo zabanye oorhulumente bebandla kunye nopapa, amaProtestanti azimisela ngokusisigxina eYurophu. Abantu babechaphazelekayo kumgangatho wobuncinci, nangokomoya, ukufumana ukholo olutsha, kunye noluntu lwezopolitiko, njengoluhlu olutsha olongezelelweyo lwongezwa kwindlela echanekileyo. Imiphumo, kunye neengxaki, zeNguqulelo zihlala kuloo mini.